हामीले रुचाउने पुस्तकहरू? पढ्नको लागि हेर्नुहोस्। _Cyrano de Bergerac_, _The ओपेरा_को प्रेत र _हरू दयनीय_ | वर्तमान साहित्य
हामीले रुचाउने पुस्तकहरू? पढ्नको लागि हेर्नुहोस्। _Cyrano de Bergerac_, _ ओपेरा_को प्रेत र _ दयनीय__
पुस्तकहरू हामी देख्छौं।
पढ्नको लागि हेर्नुहोस्। यसको सामना गरौं, म गर्छु: केहि पुस्तकहरु संग हामी सक्दैनौं। लामो, "बाक्लो", पछ्याउन गाह्रो ... वा साधारण रूपमा, र पक्कै पनि यो आलस्यको लागि त्यस्तो हो, जो उनीहरूको फिल्म संस्करणहरू हुन्। संस्करणहरू जुन सारांश वा ती मूल पाठहरूलाई अनुकूलन गर्दछ र तिनीहरूलाई हल्का वा पचाउँछ। वा हामीले ती पढिसकेका छौं, हामीले त्यसलाई स्वीकार्नु पर्छ हामी तिनीहरूलाई "हेर्न" चाहन्छौं.
यो सामान्यतया हामीसँग हुन्छ ठूला कामहरू इतिहासका सर्वश्रेष्ठ लेखकहरूको। यद्यपि ती संस्करणहरू उनीहरूको साहित्यिक सन्दर्भहरूमा निकै निकृष्ट छ। के अधिक, केहि छनौट गर्न को लागी धेरै छन्। आज म तीन महान फ्रेन्च क्लासिकको बारेमा कुरा गर्दैछु। प्रत्येकले आ-आफ्नो लागू गर्न दिनुहोस्।
1 Cyrano de Bergerac - एडमंड रोस्टान्ड
2 ओपेरा को प्रेत - Gaston Leroux
3 लेस मिसवेरेल्स - भिक्टर ह्यूगो
4 जे भए पनि
Cyrano de Bergerac - एडमंड रोस्टान्ड
एउटाले सिरानो शब्द देख्छ र अर्कोको अनुहार (र नाक) हो गेरर्ड डिपोर्डियू। वा हुनसक्दछ कि उनीहरूले हेर्ने ठाउँको सब भन्दा पुरानो हो जोस फेरेर। वा हुन सक्छ जोस मारिया फ्लोट्स, जसले यी भागहरूमा यसलाई खेलायो। तर आफ्नो हात उठाउनुहोस् कसले पढ्यो को अलेक्जान्ड्रिया पदहरू खेल्नु त्यो फ्रान्सेली नियो-रोमान्टिकले लेख्यो एडमंड रोस्टान्ड र प्रीमियर 1897.
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, सिनेमाहरूमा वा सिनेमाघरमा असंख्य अनुहारहरू छन्, तर डेपार्डिउ र फेरेर ती हुन् जसलाई हामी सबैभन्दा धेरै सम्झन्छौं। सबैभन्दा सफल पनि। दुबै अभिनेताहरू उनलाई पुनरुत्थानको लागि एक अस्कर (फेररले जिते) का लागि नामित भए हरक्युल-सविनिन साइरानो डे बर्गेराक, १ XNUMX औं शताब्दीका सिपाही, कवि र रोमान्टिक सन्दर्भ बराबर उत्कृष्टता जुन उनी थिए।
हामीले यसका केही संस्करणहरू देख्यौं। १ 1950 in० मा फेररको कुराबाट १ 1990 XNUMX ० मा डेपार्डिउसम्म, खास गरेर पछिबाट जो यो फ्रान्सेली भाषामा सुनेर उदात्त हुन्छ। र इमान्दारीपूर्वक, म अझै यो पढ्न छैन।
ओपेरा को प्रेत - ग्यास्टन Leroux
ओपेरा को phaaantom यहाँ छ ... मेरो दिमाग भित्र ...
किनभने त्यो के हो canto जब म ती अक्षरहरूमा हेर्छु। म यसको कुनै पनि फिल्म संस्करणहरू चयन गर्दिन, तर योसँग संगीत यो र अर्को शीर्षक इतिहास मा सबै भन्दा राम्रो मानिन्छ। र यदि स्टाफलाई साहित्यिक कार्यको लेखकको बारेमा सोधिन्छ भने, निश्चित रूपमा धेरैले यसको नाम दिए एन्ड्रयू लियोड वेबबर.
प्रख्यात अंग्रेजी कम्पोजरले यसको वास्तविक निर्माता, साइटबाट साइट चोरी गरेको छ फ्रान्सेली पत्रकार र लेखक ग्यास्टन Leroux। को प्रशंसक शैली लेखक गथिक डर र रहस्य, Leroux मा आफ्नो सबैभन्दा प्रसिद्ध शीर्षक प्रकाशित 1910। तर जसले उनलाई अनन्त महिमामा उचाल्नुभयो एक वेबर थियो एक अविस्मरणीय संगीतको लाइब्रेटो संग।
त्यहाँ असंख्य अनुहारहरू र आवाजहरू छन् जुन संसारभरका महान गायकहरूले दन्त्यकथनमा राखेका छन् माइकल क्रफोर्ड महान सम्म गेरोनिमो राउच यसको स्पेनिश संस्करणमा र भित्र पनि लन्डन। तपाईका हातहरू उठाउनुहोस् जसले बेलायती राजधानीको भ्रमण गरिसकेका छन् र पोष्टरको अनुहारमा देखेका छैनन् उनको महाराजको थियेटर Haymarket Street मा। मेरो सबैभन्दा सांगीतिक मुटुको एक अंश त्यहाँ तीन पटक बसे।
अवश्य पनि, म पनि हाइलाइट गर्दछु फिल्म संस्करण डी 1943 मेरो एक मनपर्ने क्लासिक कलाकारको साथ, क्लाउड वर्षा । त्यहाँ छ भन्दा पहिले लन चन्ने श्री। र अन्तिम एक उनले अभिनय गरी गेराल्ड बटलर २०० 2004 मा। र ... मैले यो पढेको पनि छैन।
दयनीयहरु विक्टर होगो
के तिमीले मानिसहरूलाई गाउँदै सुन्छौ?
के भन्ने? यो सबैभन्दा धेरै मध्ये एक हो सबै समयका महत्त्वपूर्ण उपन्यासहरू। तर तपाईंको हात उठाउनुहोस् जसले कसलाई यो पढेको छ। मैले सकेन र यस पटक मैले प्रयास गरें। एकदम सरल, र फ्रान्सेली लेखक को stalwarts बावजुद, को उच्च संगीत क्लाउड-मिशेल शöनबर्ग र एलन बोउबिल साहित्यिक कार्य खाईएको छ।
La अमर इतिहास कैदीको जीन भल्ज्यान, उहाँको अथक पीछा जाभर्ट, सानो कोसेट र दुर्भाग्यवश काल्पनिक यो पहिले नै अमरको रूपमा अन्य गीत र संगीत संग संचार गरिएको छ। यदि कसैले सा yet्गीतिक देखेको छैन भने, त्यसो गर्न उनीहरूले यथाशक्य गरोस्, वा कम्तिमा पनि सुन्नुहोस्।
त्यहाँ पनि धेरै छन् गायकहरू जसले तिनीहरूलाई आवाज दिएका छन्। सबैभन्दा ऐतिहासिक बाट कोलम विल्किन्सन पछिल्लो र धेरै सिनेमाई सम्म ह्यूग जैकमन। र स्पेनिशमा, फेरि अर्जेन्टिना रूच। म आधा भन्दा बढी पढ्न को लागी वचन दिन्छु। तर एक दिन म यो लिन सक्दिन र त्यहाँ यो जारी छ।
जे भए पनि
के थप शीर्षक तपाईँ सँग छ? आउनुहोस्, त्यो सूची बनाउनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » हामीले रुचाउने पुस्तकहरू? पढ्नको लागि हेर्नुहोस्। _Cyrano de Bergerac_, _ ओपेरा_को प्रेत र _ दयनीय__
आइसल्याण्ड, यो देश जहाँ तपाईंलाई लेख्न भुक्तानी हुन्छ
होटल काफ्कामा साहित्यिक पाठ्यक्रमहरू